Lego Disney Black Friday သဘောတူညီချက် ၂၀၂၁ Brick Fanatics
Lego Disney Black Friday သည် ၂၀၂၁ ဖြစ်သည်
သင်သည် House of Mouse ကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ကိုသာကြည့်ပါ Disney ရဲတိုက်၊ ဒီမှာအားလုံးရဲ့နိဂုံးချုပ်အပြည့်ရှိတယ် Lego Disney ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိုသော သဘောတူညီချက်များ Black ကသောကြာနေ့ 2021 ၌တည်၏။
နောက်ဆုံး LEGO Disney Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
ကုန်ဆိုင်Disney UK သည် ၎င်း၏ အဓိက ရဲတိုက်နှစ်ခုအတွက် ကြီးမားသော လျှော့စျေးများကို ပေးနေသည်။ အချိန်မနှောင်းမီ ဒါတွေကို သေချာရိုက်ပါ။
71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် - ယခု£ 299.99, £ 239.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက် - ယခု£ 199.99, £ 159.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43179 Mickey နှင့် Minnie ပုံများ - ယခု£ 169.99, £ 135.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
1044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ - ယခု£ 299.99, £ 239.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
Zavvi UK နှင့် USA တို့က အသီးသီးကမ်းလှမ်းသည်။ Disney အခုပဲ လျှော့စျေးတွေ။ နံပါတ်တစ် Disney ထုတ်ကုန်များမှာလည်း တွေ့နိုင်သည်။ Firestar ကစားစရာ. သင့်မှာယူမှုအပေါ် 10% လျှော့စျေးရရှိရန် ငွေရှင်းချိန်တွင် BF10 ကို ထည့်သွင်းပါ။ နောက်ဆုံးထွက်တွေအားလုံးကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ နေ့တိုင်း အပ်ဒိတ်များဖြင့် ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ လျှော့စျေးများ။
43195 Belle & Rapunzel ၏ Royal Stables - ယခု£ 44.99, £ 31.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43187 Rapunzel မျှော်စင် - ယခု£ 54.99, £ 39.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
41168 Elsa ၏ လက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ - ယခု£ 39.99, £ 29.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43191 Ariel ရဲ့ပွဲလှေ - ယခု£ 24.99, £ 22.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
10941 Mickey & Minnie မွေးနေ့ရထား - ယခု£ 24.99, £ 22.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
43189 Elsa နှင့် Nokk Storybook - ယခု£ 17.99, £ 14.49 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
41168 အဲလ်ဆာရဲ့ရတနာ Box ကို - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43180 Belle ရဲ့ရဲတိုက်ဆောင်းရာသီပွဲ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43188 Aurora's First Cottage - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
10899 အေးခဲရေခဲပြင် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43187 Rapunzel မျှော်စင် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41166 အဲလ်ဆာရဲ့ Wagon စွန့်စားမှု - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Lego Disney Castle Black Friday အပေးအယူ
အဆိုပါ Lego အခုအုပ်စုနှစ်စုကွဲသွားပြီ Disney စင်ပေါ်ကရဲတိုက်တွေ 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် နှင့် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်မင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ရနိုင်တဲ့ display space မရှိပဲ Magic Kingdom ကိုမင်းရဲ့အချစ်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းတယ်။ ပိုကြီးသောရဲတိုက်သည် ၄,၀၈၀ အပိုင်းအစသားရဲဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောပေါင် ၂၉၉.၉၉ / ၃၄၉.၉၉ / € ၃၄၉.၉၉-ပိုသစ်သောအရွယ်အစားသေးငယ်သည့်ဗားရှင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်ဝက်ကို microscale model ကိုပေးသည်။
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မှားသွားလို့မရပေမယ့် Black ကသောကြာနေ့ ယခု ငါးနှစ်သားလေးကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် လျှော့စျေးမှာ မပါလျှင်ပင်ယခုနှစ်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ယူခြင်းအပြင်အပိုဆု VIP ရနိုင်သောအလားအလာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်လုံလောက်သည်။
Lego Disney Princess Black Friday အပေးအယူ
ထူးခြားနေချိန် Disney မင်းသမီးတံဆိပ်သည် ၂၀၂၁ တွင်လုံးဝနီးပါးဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသည် Disney တံဆိပ်၊ အစဉ်အလာအရယခုထီးအောက်တွင်ကျရောက်မည့်အစုံများစွာရှိနေပါသေးသည်။ 43187 Rapunzel's Tower, 41167 Arendelle Castle နှင့် 43191 Ariel ရဲ့ပွဲလှေ သင့်စာရင်းတွင် မြင့်မားသင့်သော အစုံအားလုံးဖြစ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ 2021 ခုနှစ်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှော့စျေးများကို အခွင့်ကောင်းယူရန် သို့မဟုတ် သီးသန့်လက်ဆောင်အချို့ကို ဝယ်ယူခြင်းမှ အမှတ်ရရန်ဖြစ်စေ။
Lego Disney minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
နှစ်ယောက်စလုံး၏နေစဉ် Disney စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဇာတ်လမ်းတွဲများသည်အငြိမ်းစားယူထားသူများ၊ မျက်မမြင်အိတ်စွပ်အိတ်များသည်ဆောင်ပုဒ်၏အထင်ရှားဆုံးဇာတ်ကောင်များကိုစုဆောင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ မစ်ကီနဲ့ဂိုဏ်းအများစုကိုဒီနှစ် Mickey နဲ့မှာရနိုင်ပါတယ် Friends Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck, Goofy နှင့် Pluto တို့အပါအ ၀ င် ၄+ ကျော်။
ထို minifigures များ၏ထူးခြားသောဗားရှင်းများကိုလည်းသင်အကြိုက်တွေ့လိမ့်မည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် နှင့် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်ပိုကျယ်တယ်၊ Disney မင်းသမီးနှင့် Lego Disney အပိုင်းအခြားများသည်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် classic အက္ခရာများ ရှင်းရှင်းပြောရရင်မင်းကိုအားပေးဖို့နည်းလမ်းတွေမလုံလောက်ဘူး Lego Disney ဒီ minifigure စုဆောင်းမှု Black ကသောကြာနေ့ထို့ကြောင့် သင့်အကြိုက်များနှင့် အတွဲများပေါ်တွင် အပေးအယူများကို စောင့်ကြည့်ပါ။
Lego Disney Black Friday ရထားကိုအပေးအယူလုပ်ပါ
71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ လက်ရှိတွင် 2021 နှစ်ကုန်တွင် အနားယူရန် စီစဉ်ထားပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအချို့တွင် ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သင့်ဆီကနေ လုံးဝ မရေးပါနှင့် Black ကသောကြာနေ့ စျေးဝယ်စာရင်း- ၎င်းသည် ယခင်က အချို့သောဒေသများသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ LEGO.com ရောင်းထွက်ခဲ့သော်လည်းနိုဝင်ဘာ၌ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်။
2,925-piece set တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ ဝါရင့်ရှိခြင်း၊ ယခင်လျှော့စျေး ၂၀၁၉ တွင်ပေါင် ၉၀ ဖြင့်၎င်းသည်ပြန်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူရက်ရောသောရောင်း ၀ ယ်မှုကိုမြင်နိုင်သည် LEGO.com or Lego စတိုး စင်ပေါ် Black ကသောကြာနေ့ 2021 တွင် တတိယစတက်စဉ်arty လက်လီရောင်းချသူများသည်လက်ကျန်စတော့များကိုရှင်းလင်းရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်လျှော့စျေးများပေးနိုင်သည်။
Lego Disney Frozen Black Friday သဘောတူညီချက်များ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ Elsa: ငါတို့ကကြီးမြတ်တဲ့အပေးအယူတွေကိုအမှတ်ပေးဖို့အလားအလာကြုံလာတဲ့အခါငါတို့ဒါကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး Lego Disney Frozen sets များပေါ်မည်။ Black ကသောကြာနေ့. ယင်းတို့အနက် အကြီးဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးမှာ အသစ်ထွက်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ 43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက်Frozen စုဆောင်းမှုအတွက်ချက်ချင်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်သောကာတွန်းရုပ်ရှင်အတွက်အပိုင်း ၁,၇၀၉ အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
၎င်းသည်စင်ပေါ်သို့ရောက်သည်အထိကြီးမားသောလျှော့စျေးများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ £ 199.99 / $ 199.99 / € 209.99 set သည်ယခုနှစ်လက်ဆောင်များနှင့် ၀ ယ်ယူမှုအတွက်အလားအလာနှစ်ဆ VIP ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှတ်များသည်ဖမ်းဆုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောမက်လုံးတစ်ခုဟုသက်သေပြနိုင်သည် 43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက်မရ။ စျေးပိုသက်သာပြီးအရမ်းအေးတဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်အမြဲရှိတယ် 43172 Elsa ၏မှော်ပညာ ရေခဲနန်းတော်.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ လူအပေါင်းတို့သည်ထွက်စစ်ဆေးရန် Black ကသောကြာနေ့ 2021 လျှော့စျေးများနှင့် ဤစာမျက်နှာကို စောင့်ကြည့်ပါ။ Lego Disney-အထူးလျှော့စျေးများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းများ။